saina | Sahaja yoga in Madagascar
Posts Tagged ‘saina’
Ny meditation dia rehefa mifandray amin’i Masina ianareo
Posted by benirastro in Sahaja yoga.	Tagged: fanetrentena, Ganesha, guru, Masina, meditation, Nirvichara, saina.	Leave a comment
“…Ankehitriny, voalohany indrindra, alohan’ny idirana ao anaty, ao anatin’ny fonareo. Tokony hojerenareo ny ao am-ponareo, ary andramo apetraka ao an’ivony ny Guru-nareo.
Aorian’ny fametrahana azy ao am-po, tokony hiankohoka eo anoloany ianareo izay arahan’ny fanetrentena sy fanolorantena. Ankehitriny fa na inona na inona ataonareo amin’ny sainareo, aorian’ny Fahatanterahana ara-panahy, dia tsy famisavisana izany satria ny sainareo, ny famisavisanareo, dia efa mazava.
Noho izany midira ianareo mba hahay hanetry tena eo an-tongotry ny Guru-nareo ianareo ary ankehitriny dia mangataha ny toetra ilain’ny “méditation”, na ny rivotra ilain’ny méditation. Ny méditation dia : rehefa mifandray amin’i Masina ianareo.
Ankehitriny, raha misy eritreritra tonga dia tokony teneninareo ny mantra voalohany indrindra, marina izany, ary jereo ao anaty. Tokony ataonareo ihany koa ny mantran’ny Ganesha, hanampy olona maro izany. Ary te hijery ny ao anatinareo ianareo ary hahita avy aminareo ihany ireo sakana goavana rehetra.
Voalohany indrindra ny eritreritra. Ankehitriny, ho an’ny eritreritra, tokony ho teneninareo ny mantran’ny Nirvichara, izay hoe “Twameva sakshat Nirvichaar sakshat Sri Mataji Nirmala Devi namoh namaha”.
Mila teneninareo in-telo izany.”
H.H Shri Mataji Nirmala Devi – Dollis Hill ashram, Londres (UK), 18 Novambra 1979
Shri Mataji in Argentina
Shri Mataji in Dubai